CNC Router Kucheka Machine Fekitori - China CNC Router Kucheka Machine Vagadziri, Vatengesi
1530 CNC achiita zvokutemera Machine
Shenya CNC kugadzirwa kwehunyanzvi uye kutengesa Kamera patrol engraving uye yekucheka muchina kushambadza, engraving muchina, mabwe ekunyora muchina, kuveza matanda muchina uye mamwe masitaera ekunyora muchina, kune yakakosha tekinoroji yekutsvagisa uye timu yekusimudzira. Shenya CNC achiita zvokutemera muchina wemuviri mamiriro uchishandisa yepamusoro simbi mutopota kutenderera, kudzima kurapwa, geometric furemu chimiro, yakasimba kutakura kugona, diki deformation, yakasimba; uchishandisa yakasarudzika akangwara kufanotaura algorithm, ipa kutamba kuzere kune zvingakwanise mota, kuwana yakakwira-kumhanya machining, yakatwasuka mutsara kuenderana, inotsvedza curve; kugadzikana kuri nani. Software kugarisana; inowirirana neakasiyana siyana CAD / CAM dhizaini uye yekugadzira software senge Type3, Artcam, Castmate, uye Wentai.